चकलेटको शौखिन हुनुहुन्छ ? अब विश्वबाट चाँडै नै चकलेटको नामोनिशानो मेटिदैछ ! - सिम्रिक खबर
एजेन्सी । गुलियो भनेपछि कसलाइ मन नपर्ला । चिनिसम्बन्धी समस्या भएका मानिसहरु बाहेक सबैलाइ गुलियो खान अत्यन्तै मन पर्छ । मधुमेह भएकाहरुलाइ पनि मन नपर्ने त कहाँ हो र ? खान नहुने नभएकै कारण सेवन नगरेका हुन् ।
तपाइ पनि गुलियोको अथवा मिठाइको भुक्तभोगी हुनुहुन्छ भने त्यो रहर केही बर्षसम्म मज्जाले पुरा गर्नुहोस । किनकी केही बर्षपछि हामीलाइ त्यो अवसर आइरहने छैन् ।
एक अध्ययनका अनुसार केही बर्षमै संसारमा चकलेटको उत्पादन बन्द हुँदैछ ।
चकलेटका लागि प्रयोग गरिने कुको विश्वमा बढीरहेको गर्मी अर्थात ग्लोबल वार्मिङका कारण विश्वबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेको कारण चकलेटको उद्योग संकटमा परेको हो ।
यूएस नेशनल आसिएनिक एन्ड एटमोसफेयरिक एडमिनिस्ट्रेसनको रिपोर्टमा दिइएकोे जानकारी अनुसार यसैगरी विश्वमा तापक्रम बढीरहने हो भने अबको ४ दशकमा विश्वबाट चकलेट लोप हुँदै छ । त्यसपछि हामीले चकलेटको शौख राखेपनि केही लाग्ने छैन । किनकी यसको नामोनिशान नै मेटिन सक्नेछ ।
रिपोर्टका अनुसार चकलेटको मु्ख्य स्रोत कोकोको पैदावारका लागि २० डिग्री भन्दा कम तापमान हुनु आवश्यक छ । केबल यती तापमानमा कोकोको उचित पैदावार गर्न सकिन्छ । यदि विश्वमा यस किसिमको तापमानमा बढोत्तरी भइ रह्यो भने आगामी ४० सालमा कोकोको पैदावार कम हुन सक्छ । जसको कारण चकलेट झट्ट नपाइने तथा कतै पाइएको खण्डमा अत्यन्तै महँगो हुने सम्भावना रहेको छ ।
अमेरिकी संस्थानको रिपोर्ट अनुसार बढ्दो प्रदूषण, आबादी आदिका कारण पृथ्वीमा तापमान धेरै तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । सबै विकसित देशले यदी आफ्नो कार्बन उत्सर्जन कम गरेनन् भने ग्लोबल वार्मिङमा नियन्त्रण पाउन मुश्कील हुनेछ । यसबाट चकलेट उत्पादन उद्योगमा संकटको बादल आउन सक्छ । विस्तारै यस उद्योग बन्द हुँदै जानेछन् भने विश्वबाट चकलेटको नामोनिशान मेटिन सक्नेछ ।